आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष मल्होत्राद्वारा आफैले उत्पादन गरेका मास्क चिकित्सक संघलाई हस्तान्तरण — onlinedabali.com
आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष मल्होत्राद्वारा आफैले उत्पादन गरेका मास्क चिकित्सक संघलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं । आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले नेपाल चिकित्सक संघलाई पाँच हजार मास्क हस्तान्तरण गरेका छन् । मल्होत्राले आफ्नै कम्पनीबाट उत्पादित मास्क नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीलाई सहयोगस्वरुप हस्तान्तरण गरेका हुन् । मलहोत्राले आफ्नो कम्पनीबाट उत्पादित मास्क बिभिन्न अस्पताल, सुरक्षा निकाय, सामाजिक कार्यकर्ता र पत्रकारहरुलाई निःशूल्क बितरण गर्दै आएका छन् ।
कोरोना भाईरसको महामारीमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर चिकित्सकहरु बिरामीको उपचार गरिरहेका चिकित्सकहरुलाई संघकै कार्यालयमा पुगेर आइतबार मास्क हस्तान्त्रण गरेका थिए । कोरोना भाइरससँगको लडाइँको पहिलो मार्चामा रहका चिकित्सकहरुलाई मास्क सहयोग गर्न पाउँदा आफू खुशी भएको मल्होत्राले बताए । उनले भोलिका दिनमा पनि चिकित्सक संघसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने जनाउँदै अहिलेको महामारीमा संघलाई थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मास्क प्राप्त गरेपछि बोल्दै संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) फैलिन सक्ने त्रासकाबीच मास्क अभाव भइरहेका बेला मल्होत्राले ठूलो मात्रामा मास्क उत्पादन गरेर देशको लागि ठूलो सहयोग गरेको बताउँदै धन्यवाद थिए ।
सो अबसरमा बोल्दै मल्होत्राले अहिले ब्याबसाय गर्न भन्दापनि सामाजिक कामका लागि मास्क कम्पनि सन्चालनमा ल्याएको बताए । उनले आफ्नो कम्पनीले दिनमा करिब ७० हजार मास्क उत्पादन गर्ने र शुरुका दिनमा उत्पादित मास्क सबै हस्पिटललगायतका क्षेत्रमा वितरण गरिँदै आएको बताए ।
अबको केहि दिनबाट मास्कको अभाव नहुने समेत दाबी गरे । आफूहरुले उत्पादन गरेको सर्जिकल मास्क बजारमा समेत उपलब्ध रहेको उनले बताए । “हामीले मास्क उत्पादन सुरु गरेपछि बजारमा मास्कमा भइरहेको कालोबजारी पनि अन्त्य भएको छ । बजारमा छ्यापछ्याप्ती मास्क उपलब्ध हुँदैछ अब मास्क नपाएर आत्तिनु पर्दैन” मल्होत्राले भने । उक्त मास्क न्युन मूल्यमा पाइने समेत मल्होत्राले जानकारी दिए ।
संकटको बेला जनता र सरकारलाई सहयोग गर्न पनि नाफा नखाने उनले बताए ।
चेम्बरले केही समयअघि कोरोनाभाइरस नियन्त्रणसम्बन्धी बनाएको सहजीकरण समितिको संयोजक समेत रहेका मल्होत्रा अहिलेको लकडाउनको समयमा पनि दैनिक मास्क वितरण गर्नमै व्यस्त रहेका छन् । मल्होत्राले अहिलेको महामारीमा घरमै बसी सरकारले लागु गरेको लकडाउन पालना गरिदिन समेत सबैलाई आग्रह गर्दै आफु सुरक्षित हुँदै समाजलाई समेत कोरोनाबाट सुरक्षित राख्न अनुरोध समेत गरे ।